Kooxda Manchester City oo ku soo biirtay tartanka loogu jiro saxiixa Kalidou Koulibaly – Gool FM
(Manchester) 10 Okt 2019. Kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa lagu soo waramayaa inay ku soo biirtay ugaarsiga loogu jiro daafaca dhexe ee Napoli, Kalidou Koulibaly.
Kooxda xafidanaysa horyaalka Premier League ayaa difaac dhexe u haysata Aymeric Laporte iyo John Stones iyadoo labadooduna ay garoomada ka maqan yihiin, waxaana Laporte uu qarka u saaran yahay inuu seego inta ugu badan xilli ciyaareedkan.
Daaficii waqtiga dheeraa ahaana kabtankii kooxda ee Vincent Kompany ayaa isaga tagay Sky Blue intii lagu guda jiray suuqii xagaaga, taasi waxa ay la micno noqotay in Fernandinho uu ka dheelo daafaca dhexe, isagoo ka garab ciyaarayey Nicolas Otamendi, waxaana ay guuldarro 2-0 ah Axaddii ka soo gaartay kooxda Wolverhampton Wanderers.
Sida ay sheegayaan wararka laga helayo gudaha Spain, macallinka Man City ee Pep Guardiola ayaa shaaca ka qaaday inuu doonayo in kooxdu ay la soo saxiixato daafac dhexe oo cusub suuqa kala iibsiga xiddigaha ee bisha Janaayo, Koulibaly ayuuna u aqoonsaday inuu yahay mid ay suuro-gal tahay inuu soo iibsado.
28-sano jirkaan kaasoo sidoo kale la la xiriirinayey kooxaha Manchester United iyo Real Madrid intii lagu guda jiray suuqii kala iibsiga xiddigaha ee xagaaga ayaa in ka badan 200 oo kulan u saftay kooxdiisa Napoli tan iyo markii uu u uga soo biiray Genk sanadkii 2014-kii.
Si kastaba ha noqotee, Napoli ayaa la sheegayaa inaysan diyaar u ahayn inay iska iibiso xiddiga heerka caalami ee dalka Senegal haddii kale la bixiyo lacagaha qandaraaskiisa lagu burburin karo ee 110 milyan oo gini ah, taasoo ku qiimeyn karta Citizens inay bartamaha xilli ciyaareedka la soo wareegaan.
Messi oo rikoodh cajiib ah ku garaacay Ronaldo… (BAL EEG isbar-bardhiga xiisaha badan ee lagu sameeyay labadan xiddig)